UServius Tullius: uKumkani wase-6 weRoma
UKumkani we-6 weRoma
Ngethuba lexesha eliqhelekileyo, xa ookumkani belawula iRoma, ubukumkani besithandathu beza kuzalelwa eRoma. WayenguServius Tullius, unyana wendoda ekhokelayo esuka kwisixeko saseLatini saseConiculum, okanye mhlawumbi uKumkani Tarquinius uPriski, ukumkani wokuqala wase-Etruscan waseRoma, okanye unqwenela kunoko, unkulunkulu uVulcan / Hephaestus .
Ngaphambi kokuba uServius Tullius azalwe, uTarquinius uPriscus wabamba iMiciculum. Ngokwe-Livy (59 BC-AD-17), ukumkanikazi wase-Roma wase-Etruscan owazalwa ngokutsha, uTanaquil, wathatha umama othunjiweyo (Ocrisia) endlwini yaseTarquin apho unyana wakhe wayeza kuvuswa khona. UTanaquil wayesazi kakuhle iindlela zokubhula zase-Etruscan ezenza ukuba aguqule ngokucacileyo ngoServius Tullius kakhulu. Esinye isithethe, esiqinisekiswa nguKumkani uKlawudiyo , senza uServius Tullius i-Etruscan.
Abafazi ababanjwe kwiimfazwe zamandulo babekhoboka ngamakhoboka, ngoko uServius Tullius wathathwa ngabanye ukuba yindodana yekhoboka, nangona iLiby inentlungu yokuchaza ukuba unina akazange abe ngumkhonzi, yingakho oko egxininisa ukuba isiLatini Uyise kaServius Tullius wayeyinkokeli yoluntu. Kamva, i-Mithradates yayikuhlekisa amaRoma ayekhoboka njengenkosi. Igama elithi Servius lingabhekisela kwindawo yakhe yokukhonza.
UServius Tullius waphumelela eTarquin njengenkosi yaseRoma (r. 578-535) ngendlela engafanelekanga engekho mthethweni. Njengookumkani, wenza izinto ezininzi zokuphucula umzi, kuquka ukuwandisa nokuzakhela izikhumbuzo. Kwakhona wathatha ubalo lokuqala, wabuya wabuya umkhosi waza walwa namaqela aseItali. UTJ Cornell uthi ngamanye amaxesha ubizwa ngokuba ngumsunguli wesibini waseRoma.
Wabulawa nguTalquinius Superbus okanye umfazi wakhe onqwenela, uTullia, intombi kaServius Tullius. [Bona uLiyy ekufeni.]
UServius Tullius Ngokwe-Livy
ULiby unikeza ibali elifutshane, elicacileyo lobomi bobuqu kunye nobupolitika bukaServius Tullius, kuquka indlela uTanaquil eyamnceda ngayo uTervius Tullius etroneni kunye nolwalamano lwakhe noonyana bakaKumkani uAncus Marcius (Martius) kunye neTalkquins.
Umlinganiselo weeKumkani zaseRoma
Eli nqanaba libonelela ngokulandelana kunye nemini yookumkani abangama-7 baseRoma. Kukho nenkcazelo emfutshane ngamnye wookumkani. Kaninzi "
Servius Tullius Reforms
UServius Tullius uvakaliswa ngokwenza ukulungiswa komgaqo-siseko kunye nokwenza ubalo, ukwandisa inani lezizwe, kunye nokongeza abantu abaninzi kwicandelo labo bafanelekile ukuba bathathe inxaxheba kwiindibano zokuvota.
Reform Military Reforms
Ukuguqulwa kwe-Servian yombutho wabemi kwathintela umkhosi, kuba uServius wongezelela inani elitsha lamalungu kwi-count. UServiyu wawahlula amadoda eminyaka, eyayiyimikhosi yemikhosi. Umntu oqhelekileyo we-centurion kwiimpi zamaRoma unxulumene nale minyaka. Wabahlula iiklasi kwiindawo ezindala kunye neentshazana ukuze kubekho isiqingatha inani lamadoda ukuba ahlale kwaye alinde indlu yangaphambili ngelixa esinye isiqingatha sahamba ukuze silwe nemfazwe engapheliyo yamaRoma. Kaninzi "
Asazi nokuba uServius Tullius wadala ngaphezu kwezizwe ezine zasezidolophini, kodwa ukulungelelaniswa kwakhona kwabemi kuloo ndawo kunokuba iinqununu ezisekelwe kwintsapho zikhokelela ekudalweni kwezizwe ezingama-35. Izizwe zivotelwe kwindibano yesizwe. Emva kokuba inani le-35 libekwe njengomlinganiselo wokugqibela, izakhamuzi ezintsha zongezwa kula maqela, kwaye udidi lomhlaba lwentsebenziswano lwaye lwacutha. Ezinye iintlanga zaba zihlwele kakhulu ezithetha ukuba iivoti zabantu zibalwa ngokuthe xaxa kuba nje ivoti yeqela libala.
Ingxenye yodongeni lwaseRomvia lwaseRoma, kufuphi nesiteshi sezitrosi saseTemini. CC Flickr Umsebenzisi Panairjdde
UServius Tullius uvakaliswa ngokukhulisa isixeko saseRoma, nokwakha i-Servian Wall edibanisa iPalatine, i-Quirinal, Coelian, neAventine, kunye neJaniculum. Uthiwa ukwakhiwa kweNdlu kaDiana kwiAventine (u-Diana Aventinensis) ukukhonza njengeziko lokukhonza u-Diana kwiLatin League. Imihlatshelo yeMidlalo yeMidlalo yenziwa ku-Diana Aventinensis. Abapheli be-Archaeologists bakholelwa ukuba iindonga nethempeli zakhiwa kamva. UServius Tullius wadibanisa noothixokazi u-Fortuna kuye wakha izakhiwo ezininzi, kubandakanywa nalowo kwi-Forum Boarium.
Qaphela: Isahluko "Ukwandiswa kweSixeko saseRoma - i-Servian Wall," ukusuka.
UServius wabeka iComitia Centuriata, ibandla lokuvota esekelwe kwicandelo labantu baseRoma ukuya kwiinkulungwane kwiinkalo zabo zoqoqosho. Kaninzi "
Ukubulala abantu baseTanananan, ngo-1989
Amadoda - uKumkani wokuqala weYiputa
Ukubiza iGosa eliPhezulu
Inkcazo ye-Hooding (iClubs)
I-Biography ye-Rev. Martin Luther King Jr.
Ngaba kufuneka ukuba uthumele iiNkxaso ze-imeyili kwiiZikolo zeeNgcawa?
Funda IsiFrentshi Esilungileyo Ukuthetha NgamaLiaisoni
I-Ismene's Monologue esuka kwi "Antigone"
I-Embassy kunye ne-Consulate-In Overview
Ukuqonda iZiseko zeNzululwazi
Imithala Engcwele yeTaoism
Khuphula iWebhusayithi yeSikolo sakho